Pottery yeGungwa: Gwaro Rakazara uye Kuunganidzwa Kwemunhu - Ikkaro
kudzidziswa >> Zvisikwa >> Potter yeGungwa
kubudikidza Nacho morato
NeGungwa Pottery isu tinonzwisisa ese iwo zvidimbu zveceramic kana mataira ayo, seGungwa Girazi, anoderedzwa negungwa, nemadhamu kana nzizi, kunyangwe zvakanyanya kuwanikwa kuzviwana pamahombekombe. Kana iwe usingazive chii iyo Girazi reGungwa ona mutungamiri wedu.
Kunze kweGungwa Pottery ivo vanoitumidza kuti Stoneware Sea Pottery. Ini handizive zita muCastilian, pamwe iyo dudziro ndeyemumvura ceramics kana yegungwa ceramics, marine ceramics e grés. Chero mubatanidzwa unoita kunge unoshanda, asi ini ndinofunga kuti mune izvi zviitiko zviri nani kuramba uchishandisa zita rechirungu.
Haisi hurukuro yakanyanya kukurukurwa uye isu hatitombowana ruzivo paInternet. Ehe, pane zvidimbu zviripo zvekutenga pamasaiti senge Etsy kana eBay, asi havazi vanhu vazhinji vanoratidza kwavo kuunganidzwa kana chero kuyedza kuzvimisikidza kana kuzvimisa.
Zvinondishamisa kuti kubva pazvidimbu zvidiki zvehari ivo vanokwanisa kutsvaga chinhu chekutanga icho chaive chavo vochishandisa sechinhu chekuchera matongo kusvika zvino uye nekunyatsonzwisisa nhoroondo yekugadzirwa kwemuno. Ivo vanotaura nezvekukosha kwakakosha muzvimedu zvakawanikwa mu makungwa makuru. Muno muSpain, uye kunyanya munharaunda yangu, padhuze nevakagadziri vepasi rose verudzi urwu rwezvinhu, ndinofunga kuti kuzivikanwa kwezvinhu zvekare kungadai kusiri nyore.
Kupatsanura uye mhando
MuGungwa Girazi Association ivo vanotaura nezve kuchimisikidza zvinoenderana nehukuru uye kupisa kwekushisa kwevhu mu:
Zvigadzirwa. Tembiricha yekupisa yakadzika inoguma neyakaipisisa uye isina kusviba zvinhu.
Stoneware. Pakati pepamusoro kupisa kwekushisa. Asina-porous, mutete uye akaomeswa zvinhu asi haina vitreous chitarisiko chakaita sevhu
Porcelain. Yakakwirira yekubika tembiricha. Yakanyanya kuoma uye vitreous, chena muvara.
Nekuve nemadhirowa, akasiyana mapatani uye mavara, akanaka kwazvo uye anodakadza zvidimbu zvakasara nemakombero akapoteredzwa uye akapfeka zvedongo.
Ini ndatanga kaunganidzwa kadiki nekuti ndinotenda kuti iwe unogona kuwana zvidimbu zvinonakidza uye muunganidzwa werunako rukuru.
Ini ndinosiya mamwe mafoto ezvimedu zvakawanikwa kusvika ikozvino
Ndine rombo rakanaka rekugara padyo nematiles matatu uye handizive kana zvikaita musiyano kana ndikawana "zvakakwana" zvidimbu zveGungwa Pottery, ndisina kuenda kunzvimbo dzinopisa uko ini ndine chokwadi chekuti pachave nezvakawanda kupfuura zvakajairwa.
Haasi zvidimbu zvidiki, uye handina kutora akanakisa mafoto (zvakadaro) asi nekufamba kwenguva ndine chokwadi chekuti chimwe chinhu chiri nani chingakwanisike. Chinangwa changu neichi muunganidzwa kutora zvinhu zvakanaka. Imwe nzira yekusvika padhuze ne unyanzvi. Hapana chimwe.
Zvimedu zvevhu zvakaputsika, zvichena izvo zvaunoona mumufananidzo zvakajairika nekuti zvapiswa uye hapana chinoonekwa mumufananidzo. Ini ndichagadzirira bhokisi nyoro nyowani kuti uve nemifananidzo yakanaka.
Zvinyorwa uye zviwanikwa
In the Girazi Girazi Association tinokwanisa mienzaniso yakanaka kwazvo.
Girazi reGungwa Ikkaro Nhungamiro
Gungwa Girazi Subreddit
Inogona kufarira iwe:
Girazi reGungwa: Gwaro reVatori
Nzira yekugadzira mvura yakasvibiswa
Chii chinonzi LEGO Boost
Nzira yekugadzira plastiki kubva mumukaka kana Galalith
Shanyira kumapako eSan José uye kutaundi reIberia
Jet yemvura yekucheka
Categories Zvisikwa Kubatikiti kufamba
Art Nyaya dzaNeil Gaiman
Gomo reMediterranean. Nongedzo yezvisikwa
1 funga nezve «Gungwa Pottery»
Gunyana 15, 2021 na6: 12 am
I. Zvekare zvekare zvehari zvegungwa, girazi regungwa, nematombo ari anokosha zvicherwa nezvimwe. muunganidzwa wangu wehari yegungwa wakakura. Ndino ziva sei kuti vaibva kupi uye kana vakakosha.
1 Kupatsanura uye mhando
2 Wangu muunganidzwa
3 Zvinyorwa uye zviwanikwa